खाना खाएपछि यास्ता गल्ति नगरेकै राम्राे ! जान्नुहाेस खाना खाएपछि के गर्ने र के नगर्ने त ! – Samacharpati Samacharpati खाना खाएपछि यास्ता गल्ति नगरेकै राम्राे ! जान्नुहाेस खाना खाएपछि के गर्ने र के नगर्ने त ! – Samacharpati
काठमान्डाैँ, १९ फागुन । धेरैलाई अन्योल हुनसक्छ खाना खाएपछि के गर्ने र के नगर्ने भन्नेमा । हामी धेरैलाई देख्न सक्छौं कि धेरै मानिसहरू खाना खाने बित्तिकै निदाउँछन् वा धेरैको चिया र कफी पिउन जान्छन् ।
यो कतिपय मानिसको बानी बनिसकेको हुन्छ । तर, यसको बेफाइदाको बारेमा नजानेरै पनि धेरैले यस्ता गल्तीहरु गरिरहेका हुनसक्छन् । जुन शरीरको पाचन प्रणालीको लागि नोक्सानदायक हुन्छ । तर, खानाको पाचन प्रणालीको लागि खाना पछि गरिने केही गल्तीहरु निम्नानुसार छन् ।
खाना पछि चिया र कफी पिउनुहुँदैन
खाना खाएपछि तुरुन्तै चिया पिउनु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक नहुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । किनभने यसले पाचन प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्छ । डाक्टरहरुका अनुसार चिया वा कफी खाना खाएको एक घण्टापछिसम्म पनि सेवन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
चिया वा कफीमा रहेको रासायनिक ट्यानिनले शरीरलाई चाहिने आइरनको अवशोषित प्रक्रियामा बाधा सिर्जना गर्छ । जसले पाचन प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्छ । यही बानीको कारण पछि एनिमिया पनि हुनसक्छ ।
खाना खाए लगत्तै फलफूल खानुहुँदैन
खाली पेटमा फलफूल उपभोग गर्नु उत्तम मानिन्छ । तर यही फल खाजा वा बिहान, बेलुकाको खाना पछि खानु राम्रो मानिँदैन । जब तपाईँको पेट भरिएको छ र त्यस फल खान सुरू गर्नुहुन्छ भने यी फलहरू पचाउन कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । जसको फलस्वरूप तपाईँ फलहरूको पर्याप्त पोषण प्राप्त गर्नसक्नुहुन्न ।
चिसो पानी नपिउनुहोस्
पिउने पानी पाचनका लागि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, खाना लगत्तै पानी पिउनु हुँदैन र चिसो वा धेरै चिसो पानी त झनै पिउनु नै हुँदैन। चिसो पानी पिउँदा त्यसले पाचन प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ । विज्ञहरूका अनुसार हामीले खाना खाइसकेपछि र खाना खाएको ४५ मिनेट पछिसम्म पानी पिउनु हुँदैन ।
खाना पछि चुरोट पिउन बन्द गर्नुहोस्
हामी सबैलाई थाहा छ कि चुरोट खानु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक कुरा हो । खाना खाए लगत्तै धुम्रपान गर्नु अझ खतरनाक हुन्छ । किनकि त्यसो गर्दा इरिटिएबल बावल सिन्ड्रोम नामक रोग लाग्नसक्छ ।
जसले अल्सरको खतरा निम्त्याउँछ । हालसम्म गरिएको धेरै अध्ययन अनुसार खाना खाएपछि तुरुन्त खाएको एउटामात्रै चुरोट सेवनले पनि अरु समयमा १० वटा चुरोट खाए बराबरको नोक्सानी शरीरलाई गर्ने गर्छ । त्यसैले खाना खाएपछि चुरोट पिउने बानी परिवर्तन गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
मदिरा सेवन नगर्नुहोस्
खाना खाए पछि रक्सी सेवन गर्ने बानी कसैको छ भने त्यो पाचन प्रक्रियाको लागि एकदमै नोक्सान दायक कुरा हो । शरीर भित्रको आन्ऽालाई यसले ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउँछ । रक्सी पिउने बानी नै छ भने खानाभन्दा १० मिनेट अघि नै पिउनु राम्रो हुन्छ । बरु यो कम नोक्सान दायक हुनसक्छ ।
खाना पछि तुरुन्तै ननुहाउनुहोस्
आयुर्वेदका साथसाथै आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पनि विश्वास गर्दछ कि खाना खाएपछि तुरुन्तै नुहाउँदा अचानक शरीरको तापक्रम कम हुन्छ । जसले रगतको संचारलाई असर गर्छ ।
यस अवस्थामा पाचन प्रक्रियामा शरीरलाई सहयोग पुर्‍याउने रगतको सञ्चारलाई असर पर्दा पाचन प्रक्रिया बिथोलिने भएकोले खानापछि स्नान गर्ने काम बन्द गर्नु नै राम्रो हुने चिकित्सकहरु सुझाव दिन्छन् ।
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका इन्जिनियरमाथी कुटपिट
कांग्रेसले ४५औँ मेलमिलाप दिवस मनाउँदै , पोखरामा प्रवचन जारी